I-2D Folding Mask Ukwenza Umshini Abakhiqizi & Abahlinzeki - China 2D Ukugoqa imaski Ukwenza Machine Factory
Kungumugqa wokukhiqiza othomathikhi ngokuphelele ukwenza ama-95 headband imaski yokuphefumula egoqekayo, evela okhaleni lwasekhaleni, i-earloop welding iye kumask ophelile. Kungaba nomsebenzi owengeziwe wephrinta ye-ink-jet ne-pad pad. Iyatholakala ukufinyelela imfuneko ye-PM2.5 mask. Ine-automation ephezulu nokuqina ngokukhipha okuphezulu futhi ikakhulu inciphisa izindleko ngokugcwalisa imikhiqizo ngasikhathi sinye.
Intengo: USD120000 / SET
Lo mshini usetshenziselwa ukuhlanganisa i-ear loop yemaski yokugoqa. Iyatholakala ukufinyelela imfuneko ye-PM2.5 mask. Ine-automation ephezulu nokuqina ngokukhipha okuphezulu futhi ikakhulu inciphisa izindleko ngokugcwalisa imikhiqizo ngasikhathi sinye.
Intengo: USD15000 / SET
Kungumugqa wokukhiqiza othomathikhi ngokuphelele ukwenza imaski yokuphefumula egoqekayo, okusuka ekhaleni ngocingo lwensimbi, ukuwelda kwe-earloop kuya kumaski aqediwe. Kungaba nomsebenzi owengeziwe wephrinta ye-ink-jet ne-pad pad. Iyatholakala ukufinyelela imfuneko ye-PM2.5 mask. Ine-automation ephezulu nokuqina ngokukhipha okuphezulu futhi ikakhulu inciphisa izindleko ngokugcwalisa imikhiqizo ngasikhathi sinye.
Intengo: USD70000 / SET
Okuzenzakalelayo nokunwebeka Indlebe Loop amaseviyethi imaski Ukwenza Machine
Intengo: USD50000 / SET
Lo mshini usetshenziselwa ukwenza imaski yokugoqa ingenalutho. Iyatholakala ukufinyelela imfuneko ye-PM2.5 mask. Ine-automation ephezulu nokuqina ngokukhipha okuphezulu futhi ikakhulu inciphisa izindleko ngokugcwalisa imikhiqizo ngasikhathi sinye.
Intengo: USD25000 / SET